UBhileham , umlumbi, wabizwa nguKumkani uBhalaki wakwaMowabhi ukuba aqalekise amaSirayeli njengoko uMoses wayekhokela eKanan. UBhalaki wathembisa ukuhlawula uBhileham ngokukhawuleza ngokuzisa ububi kumaHebhere, abesabayo. Ngobusuku uThixo weza kuBhileham, wamxelela ukuba angaqalekisi amaSirayeli. UBhileham wathumela abathunywa benkosi. UBhileham wenza, nangona kunjalo, hamba ngesibini sesithunywa seBhalaki emva kokulumkisa nguThixo ukuba "yenza kuphela into endikuxelela yona."
Endleleni, idonki likaBhileham yabona ingelosi kaThixo emi endleleni yabo, ibetha ikrele. Idonki yajika, ibetha iBhileham. Okwesibini isilwanyana sibona ingelosi, yaxubhisa udonga, yaqhayisa unyawo lukaBhileham. Waphinde wabetha iesile. Ngexesha lesithathu imbongolo yabona ingelosi, yalala phantsi kukaBhileham, owambetha kakhulu kunye nabasebenzi bakhe. Ngaloo nto, iNkosi yavula umlomo weesile, yathi kuBhileham:
"Yintoni endiyenzile kuwe ukuba undibethe ezi zihlandlo ezintathu?" (Numeri 22:28, NIV )
Emva kokuba uBhileham ephikisana nerhamncwa, iNkosi yavula amehlo enobuqili ukuze naye akwazi ukubona ingelosi. Ingelosi yamgxeka uBhileham yamyalela ukuba aye kuBhileki kodwa ukuthetha kuphela oko uThixo wamxelela.
U kumkani wamthabatha uBhileham kwiintaba eziliqela, wamyala ukuba aqalekise amaSirayeli emathafeni angaphantsi, kodwa endaweni yoko, umlumbi wanika iingxelo ezine, waphinda umnqophiso kaThixo wesibusiso kubantu baseHebhere.
Ekugqibeleni, uBhileham waprofetha ukufa kookumkani bamahedeni kunye ne "nkwenkwezi" eya kuphuma kuYakobi .
UBhalaki wathuma uBhileham ekhaya, wamthukuthelela ukuba wayibusisile kunokuba aqalekise amaYuda. Kamva, amaYuda alwa namaMidiyan, abulala ookumkani abathanu. Bambulala uBhileham ngekrele.
Iinqwelo ezivela kwibali likaBhileham kunye neDonki
UBhileham wayesazi uThixo kwaye wayenza imiyalelo yakhe, kodwa wayeyindoda engendawo, eqhutywa yimali kunokuthanda uThixo.
Ukungakwazi kwakhe ukubona ingelosi yeNkosi ibonakalisa ukungaboni kwakhe kokomoya. Ngaphezu koko, akaboni nto ebalulekileyo kwimizi yesilwanyana. Njengomboni, wayemele azi kakuhle ukuba uThixo wayemthumelele umyalezo.
Ingelosi yayisongela uBhileham kuba uBhileham wayemthobela uThixo kwizenzo zakhe, kodwa entliziyweni yakhe, wayevukela, ecinga nje ngesityhubuthelo.
"Iimpawu" zikaBhileham kwiNumeri zihambelana neentsikelelo uThixo azithembisa kuAbraham : U-Israyeli uya kuba njengothuli lomhlaba; INkosi ikwaSirayeli; USirayeli uya kulidla ilifa ilizwe elithembisiweyo; U-Israyeli uya kulibetha uMowabhi, kwaye kumaYuda aya kuza uMesiya.
INumeri 31:16 ibonisa ukuba uBhileham wabenga amaSirayeli ukuba aphendukele kuThixo aze akhonze izithixo .
Inyaniso yokuba ingelosi yabuza uBhileham umbuzo ofanayo njengoko idonki ibonisa ukuba iNkosi yayithetha ngeesile.
Ngaba iingcamango zam ziyavumelana nezenzo zam? Xa ndiyamthobela uThixo ngaba ndiyakwenza ngenyameko okanye ngeenjongo ezingcolileyo? Ngaba ukuthobela kwam uThixo kuphuma kum uthando wam kuye kwaye akukho nto?
Numeri 22-24, 31; Yuda 1:11; 2 Petros 2:15.
www.gotquestions.org; kunye ne -New Bible Commentary , ehleliwe nguGJ Wenham, JA Motyer, DA
Carson, kunye ne RT France.
Ukudibana noNowa: Indoda elungileyo
UHezekiya - uKumkani wakwaYuda ophumelelayo
Ukudibana noKumkani uDavide: Indoda Emva kwentliziyo kaThixo
U Kalebhi - Indoda eyamlandela iNkosi ngentliziyo yonke
U-Eliya - Ubungqina Babaprofeti
Ziyiphi i-Inflections kwisiNgesi zesiLwimi?
Indlela yokuLawula amaPhepha ePhepha
Umthetho Wokuqala Wamanga: Imbali kunye neengxabano